Ingqawa - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Ingqawa (Felis caracal)
Esi silo simbala ubambe ububomvu, sarha ubumdaka ngombala osisu sithand’ ukukhanya namabalana anobu orenji nemilenze emide. Ubuso bucikiziwe ngokugqithisileyo ngokwendalo. Esi silo sithathwa nje ngenye yezona Kati zibukekayo ezweni. Ingqawa le ihamba ngesidima nokuzimisela. Yincutshe yokuqabela ithanda nofumana ihleli emithini. Zikwakho nezithanda ubamnyama ngebala ezikhe zibonakale ngokwee ngxelo.
Ingqawa izingela ngobusuku, kodwa zifumana zizingela nange ntatha kusa. Zikho iingxelo ezibonisa ukuzingela emini, ingakumbi xa zizingela iintaka. Inamandla na mendu inkulu injalo ingqawa kwaye ikwazi ukuhlasela amaxhoba azo amacikane kunazo,ikwazi kanjalo ukuhlasela namaxhoba amakhulu ngomzimba kunayo. Ingqawa le iyakwazi ukutsiba ibihleli phantsi, itsibe 4 -5 metres umgama ngokusebenzisa nje imilenze yangasemva emandla makhulu. Zenza nje xa zixhumela iintaka zibhabha.
Ngokwendawo ezifumaneka kuzo Iingqawa azina mimmiselo ngexesha lodibana, kwaye imazi iyakwazi ukudibana neenkunzi noba zintathu ngethuba. Umlinganiselo wenzalo uphakathi kwe ntshonstho elinye ukuya kwamathandathu ngexesha, xa zikhulelwe malunga nentsuku ezinga mashumi asixhenxe anesibhozo. Amantshontsho akhula mihla le ngomlinganiselo oqikeleleka kwi 21 g ngosuku, noxa zithatha iinyanga ezi 16 – 18 ukukhula ngokugqibeleleyo,ziye zikwazi uzimela ukususela kwii nyanga ezi 12.
Ingqawa ziivuka ngobusuku, zihlala zodwa ziyazifihla kwaye zindlobongele. Kuthanda ukubanzima ukufumaneka kwesi silo ngoba zizingelwa ngamafama ngoba zihlupha ngemfuyo yawo.
Esi silo sihlala kumadlelo omileyo,ezingxondorheni nase zintabeni ezi nga 3000 metres ukuphakama. Nje ngezinye iikati zihlala kwiindawo ezomileyo entlango, ziphila ithuba elide ngaphandle kwamanzi, amanzi zithi ziwafumane kumanzi omzimba amaxhoba azo.
Zifumaneka phantse kulo lonke ela se Mzantsi Afrika, kumhlaba ophangaleleyo owomileyo oneengxondorha neentaba.
Ubunzima (Imazi): 11 kg
Ubunzima (Inkunzi): 15 kg
Ubude (Imazi): 109 cm
Ubude (Inkunzi): 117 cm
Ukukhulelwa: 117 cm
inani lamantshontsho: 2 - 4 (sometimes 5)
2 - 4 (occasionally 5) young are born from October - March after a gestation period of ± 2 months.
Amanqina esi silo anobubanzi kwaye imibhalo/isibotho ebalaseleyo ngaphantsi konyawo.